Ọtụtụ Best House Osisi - China Qingdao King Good New Materials
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ osisi nwere ike igwu a ọcha ikuku, n'ụzọ dị irè wepu ọrụ nke ime ụlọ mmetọ, ma ndị ọhụrụ rụzigharịa ụlọ doro chemical mmetọ, aloe, Chlorophytum, Sansevieria na osisi ndị ọzọ bụ ndị kasị dị irè eke deodorant.
NASA ọkà mmụta sayensị na mgbe afọ 20 nke research hụrụ na na 24-hour ọkụ ọnọdụ, a ite nke aloe ike iwepụ 1 cubic mita nke ikuku dị 90% formaldehyde; ite Chlorophytum nwere ike ịbụ stoves, eletriki ngwa, plastic ngwaahịa The nkesa nke carbon monoxide na nitrogen peroxide etinye obi gị dum na-agwụ, ma siphon anya 86% of formaldehyde; epupụta na ndị ọzọ na nnukwu akwụkwọ osisi epupụta ike banye karịa 80% nke ime ụlọ na-emerụ, haruru. Ya mere, na 15 square mita nke ndụ ụlọ, kụrụ na abụọ ite Chlorophytum ma ọ bụ Sansevieria, i nwere ike na ikuku ọhụrụ, n'ebe formaldehyde nsogbu.
Ke adianade do, aiviri nwere ike banye 90% nke benzene; agave nwere ike ilo 70% nke benzene, 50% formaldehyde na 24% of trichlorethylene; nghọta-acha anụnụ anụnụ nwere ike ilo 96% carbon monoxide, 86% formaldehyde. Mgbe kumquat, pomegranate, Mirabilis japonica na Haliotis diversicolor nwere ike iguzogide hydrogen Fluoride. Wisteria nwere ike iguzogide sọlfọ dioxide, chlorine na hydrogen Fluoride. Camellia, pomegranate, Milan maka nsị dị elu chlorine, nwere ihe ụfọdụ na absorption na ìgwè ike; gardenia, pomegranate, Milan nwere ike banye ime ụlọ sọlfọ dioxide; citrus na rosemary ime ụlọ ikuku nwere ike ime ka bacteria na microorganisms ukwuu belata.
Na mgbakwunye na n'elu ga-anọ ìhè ọnọdụ nwere ike banye ime ụlọ na-emerụ, haruru na green osisi potted okooko osisi, e nwere ụfọdụ okooko osisi na-abali ka ikuku dị ọcha, nke a na ahụkarị ụdị nke aja aja palm, obere acha anụnụ anụnụ ihe ndozi, straipu Gaelan , Day, cup ekara mgbọrọgwụ, akọ ọkwụrụ bekee na agu Pilan na na. Ọzọkwa, a na ụdị osisi na-nwere a nnọọ doro anya uru - mfe akuku na mmezi, nke a na-ekwukarị bụ na okooko osisi na "ezi anwu."